अर्थालङ्कारका भेदहरू - Suryawani - नेपालको पहिलो संस्कृत अनलाईन पोर्टल
साहित्यबाेध २०७७ असोज ११, आईतबार0379 पठन सूचीमा थप्नुहोस्
लुटाहाहरूको मजाको छ कूट न अड्को न पड्को छ तेलै त धूप । फलोस् या नफल्ला गरी छाड काम झरे आँप, जाँदा झटारो छ जान ।।
अर्थालङ्कारका अनेकौँ भेद छन् । जसमा दृष्टान्त पनि एक हो । दृष्टान्तका अनेकौं उपभेदहरु छन् । जसमध्ये केही दृष्टान्तीय उपभेदका उदाहरण पेश गरेको छु । आवश्यक सल्लाह, सुझावसहित इच्छुक महानुभावले रसपान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु ।
दृष्टान्त अलङ्कार अर्थालङ्कारको एक भेद हो । दृष्टिकोण वा विचारलाई तर्क, उदाहरणपूर्ण गरिने प्रस्तुति दृष्टान्त अलङ्कार हो । नीति–नियम, उपदेशात्मक काव्यमा दृष्टान्तको व्यापक प्रयोग हुने गर्दछ । तल केही दृष्टान्तालङ्कारहरूका उदाहरण हेरौं—
अर्थालङ्कारअन्तर्गत पर्ने दृष्टान्त–आक्रोसभाव अलङ्कार हो । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अप्रामाणिक, अनिर्णित, विनाकामको कुरामा जिद्धि गर्दछ त्यसलाई आक्रोशित भावले जवाफ दिनु वा संकेत गर्नु, कुनै पनि विचार, वा व्यवहारप्रति आक्रोसित हुनुका भाव दृष्टान्त–आक्रोसभावले जनाउँछ । जस्तैः
आखिरी जित्छ के मान्छे प्राणीहत्या गरेर यो
छेकिन्न छेकेर हेर, पञ्चतत्त्वसँगै छ जो ।
ए मान्छे, किन हो फुर्ती पाएको गति हो कति
कहाँ जितिस् जगत्प्राणी चलेको बुझिस् के गति ।
धर्मको नाममा हामी जुध्छौँ, बाझ्छौँ बढी किन ?
को फर्क्यो त पुगी स्वर्ग नमूना बन्न, देखिन !
लोकले भन्दै आएको उक्तिलाई ‘लोकोक्ति’ वा उखानोक्ति भनिन्छ । यो अर्थालङ्कारमध्येको एक अलङ्कार हो । यसमा नेपाली उखानटुक्काका प्रशस्त प्रयोग गर्न सकिन्छ । लोकआहानलाई समेट्नु लोकोक्ति अलङ्कारका विशेषता हुन् । केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्ः
अर्काको आङमा देख्छ साना जुम्रा हिँडे पनि
देख्दैन आङमा आफ्नो ठूलै भैंसी हिँडे पनि ।
अर्कालाई खने खाल्डो आफैँ पर्छ यता सुन
गरीबी र धनी मान्छे छुट्याउँदैन कानुन ।
आई लागे छ ए जाई के पर्नु व्यर्थमा वश
नहुने इख के मान्छे के सर्प नभए विष ।
आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडेर हुन्छ र
बिराए डर हो लाग्ने नबिराए कहाँ छ र ।
आमाको ममताभित्र अदृश्य–दृश्य विश्व छ
अरूको लाख होस् माया आमाको काख उच्च छ ।।
होशीयारी हुनैपर्छ नबन्नू तर काँतर
ल्वाङभन्दा बढी स्वाङ पचेकोचैँ कहाँ छ र ।
हत्केलो जति नै निधार शिरमा राख्छौ भने राख ए
के छेकिन्छु र सूर्य हूँ प्रिय मनू ! सक्छौ उँभै हेर ए ।
जान्दैनौ कति नाच्न आँगन भयो टेडो घुम्या पुच्छर
थुक्छौ थुक्क ममा छिटा भन कता ए बुद्धिका दुर्बल ।।
गाई कुद्दछ भीरमा यदि भने लड्ला भनू– “राम ए”
भन्दैनौ किन, तथ्य के छ यसमा “थापूँ गई काँध ए”
“कान्छोबाउ दुरुस्त देख्छु मुख रे” मारी स्वयम् बाँदर
ती तिम्रा श्रम व्यर्थ बन्दछ भने कर्मैविना आँ ! गर ।।
अगुल्टो नझोसी बलोस् के भनिन्छ
गरे आँ अलङ्कार बुझ्ने गरिन्छ ।
म चैँ ताक्छु मूढो घुँडो वञ्चरो त
उखानेहरूको जमातै दरो छ ।।
लुटाहाहरूको मजाको छ कूट
न अड्को न पड्को छ तेलै त धूप ।
फलोस् या नफल्ला गरी छाड काम
झरे आँप, जाँदा झटारो छ जान ।।
अर्थालङ्कारअन्तर्गतको दृष्टान्त–करुणाभावालङ्कार दया, विवेक, करुण, कठै, विष्मय आदि करुणादि भाववाचीय अदृश्य कारुणिक, दारुणिक भावना उत्पन्न गराउने एक अलङ्कार हो । जस्तैः
कठ्याङ्ग्रिँदै थियो रात चरी बोली उसैगरी
हल्लियो रुख के आयो उड्यो गुँड भुसैसरि ।
कसरी कसरी बाँचेँ खानै पाएँ न लाउन
मेरै निम्ति बगेजस्तै धमिलो भेल साउन ।
टेक्न साँझ उनी आइन् घरबाहिर आँगन
ल्याएकी छु दिनैनिम्ति प्यारा, मुस्केर माग न ।
रोइरहेछ हा ! विश्व कारुणका अलापमा
उदासीन वसन्तीझैँ चिर्चिरीका विलापमा ।
हिँड्दामा ठोकिए कोही तानीदेऊ सकेजति
प्राप्तिचैँ कर्ममै फल्छ चाहिएजति ओखती
अर्थालङ्कारभेदअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि समस्याको प्रत्यक्ष देखिने दृश्यको उदाहरणबाट पुष्टि हुने दृष्टान्त–दृश्यालङ्कार हो । जस्तैः
छोटो हुन्छ सधैँ छोटो लम्ब्याऊँ लम्बियोस् किन
भेल अड्दैन सुर्कामा पाटै चाहिन्छ फैलिन ।
रूप भिन्न गरी चढ्छ, ‘बनी बादल’ तर्क हो
चढ्छ मान्छे नदी झर्छ दृश्यमा छ यथार्थ जो ।
कस्तो हुन्छ त मैदान भन बाबू हिमालचैँ
सम्मै हुन्छ नि ! मैदान उचाइ छ हिमालचैँ ।
नैतिक दृष्टान्त अर्थालङ्कारको एक भेद हो । अनुशासन, नित्य कर्म, नीतिनियम धर्म संस्कार, व्यायाम कानून, न्यायिक चेतना, व्यवहार आदि कुराहरूको प्रतिनिधित्व नैतिक दृष्टान्त हो । हरेक कुराको नीतिलाई नैतिकवान बनाउने जिम्मेवारी नैतिकताले गर्दछ । जस्तैः
अर्थमा शब्दले जुक्ति पाएमा खेल्न युक्तिले
शक्तिमा भक्ति लाएझैँ स्थान पाउँछ सूक्तिले ।
उपकार कहाँ गर्ने ? अवस्थामा बुझे भयो
सर्प पालेर के काम गाई पाले भलो छ हो !
नगरी कर्मको खेती पुष्ट सन्तुष्ट हुन्छ को
नछरी भूमिमा बीज अङ्कुराउन्न पुष्प त्यो ।
अर्थालङ्कारअन्तर्गतको दृष्टान्त–प्रेमाभावालङ्कार माया, मोह, प्रेमादि आदि भाववाचीय अदृश्य प्रेमिल भावना उत्पन्न गराउने एक अलङ्कार हो । जस्तैः
कर्ममा सिर्जना फुल्न चाहना तुन्नु पर्दछ
भावना शुद्धता बुन्न मायाले उन्नु पर्दछ ।
सूर्यको तेजमा हैन उज्यालो मनमा छ ए !
दृष्टिविहीनमा सोध प्रेमी आँखा कहाँ छ रे ?
त्यता घाउ आए यता बल्झिने छु
भए पात डाली म ता हल्लिने छु
बनेमा घना झन् छिटा वर्षिने छु
जहाँ फूल फुल्छ्यौ त्यहीँ फक्रिने छु ।।
अर्थालङ्कारअन्तर्गतको विपरीतावलङ्कार विपरीतार्थ भावको उत्पन्न गराउने एक अलङ्कार हो । यसले एउटै वर्ग शृङ्खलामा कुनै पनि अवस्था, परिस्थितको भिन्न रुप जनाउने विरतीतभाव वा अर्थ जनाउ देखाउँछ । जस्तैः
उखानै छ बलेको नै आगो तापिन्छ भर्खर
निभेको छ अगुल्टो जो दिने तातो छ के भर ।
औषधी रोग खोज्नेले सास्ती नै मात्र पाउँछ
तर सित्तैं दुनियाँचैँ आफ्नै ठानी लगाउँछ ।
झट्टी साउनमा फाल्या माघमा काम आउँछ
महत्व काठकै हेर, कसरी दिन पाउँछ ?
नङ–मासु मिलेका छन् छुट्टिदैन कतै कति
तर फोहरकै भारी बस्दछन् कापमा त्यति ।
रूप सुन्दर के हुन्छ दह्रो चाहिन्छ आँत नै
सुनको बन्छ कोदाली तर खन्दैन खेत चैँ
अर्थालङ्कारअन्तर्गतको दृष्टान्त–व्यङ्गालङ्कार एक भेद हो । कुनै पनि परिस्थिति, घटनाले हास्यात्मक दृश्य देखाउँछ भने त्यसलाई व्यङ्गात्मक रुपमा प्रस्तुति दिने दृष्टान्त–व्यङ्गालङ्कार हो । जस्तैः
कि खान्छ आँटले भन्छन् खान्छ रे कि त ढाँटले
जस्तै संकट होस्, भ्रष्ट कहाँ रोकिन्छ जाँचले ।
जोडे ‘लाई’ दुई–चार तोडे लाइक बाह्र छ
जोड्ने–तोड्नै दुवैभन्दा अझै ‘कमेण्ट’ प्यार छ ।
झोलीको तुनुमा गाँठो ओलीको फुकुवासँग
लोलीको टोलमा लाए काव्यका चँदुवा रङ ।
नमास्नू धर्म संस्कार मेरा बा भुत्भुताउँथे
आजै काम्रेड भेटेको के को हात मिलाउँथे ।
शङ्काले पिट्दथ्यो लङका खुईल्याएर ती कुरा
अम्रिका चीनको शङ्का गर्दछन् आजका भुरा ।
अर्थालङ्कारअन्तर्गतको दृष्टान्त–सत्य (सत्यालङ्कार) पनि एक भेद हो । कुनै पनि परिस्थिति, घटना, दृश्य, वस्तुमा परेको प्रत्यक्ष दृष्टिभाव नै दृष्टान्त–सत्य हो । दृष्टान्त–सत्य (सत्यालङ्कार)ले जस्ताकोतस्तै हेरफेर नहुने भन्ने भावको प्रतिनिधित्व गर्दछ । जस्तैः
उक्लने किन ओर्लन्छ जस्तै देऊ दवाव ओ
उँभै जान्छ सकेसम्म ओर्लदैन धुवाँ उँधो ।
खन नित्य कुटाले नै नढल्ने छन् पहाड खै
पग्लेकै छ नि गाल्दामा जस्तै कडा फलाम नै ।
खोंचे थापी कहाँ हुन्छ, जता पायो त्यहीँ तर
थापी हेर भँगालोमा मिल्छ माछा भयङ्कर ।
गोटीका खेलमा हेर, हात्ती घोडा ढलाउँछ
राजा मन्त्री जता जो हुन् सिपाही नै चलाउँछ ।
बस्दछन् पोटिला काव्य उड्दछन् हलुका भए
भुस चामल छुट्टिन्छन् नाङ्लाको फाँचमा परे ।
मान्छेको नाकमा मात्र सिनो ठुस्स गनाउँछ
गिद्दकानिम्ति के भो र खानै हो, मग्मगाउँछ !
- न्याैपाने सिन्धुपाल्चाेकमा रही नेपाली छन्द कविताकाे साधना गर्नुन्छ । साहित्यमा शास्त्रीय परम्परा बारे समालाेचना पनि गर्नृहुने न्याैपानेका बृहत्तर महाकाव्य चन्द्रयुगलगायत दर्जन बढी कविताकृतिहरू प्रकाशित छन् ।
तपाईको प्रतिकृया कस्तो छ?
के वैदिक संस्कृति असान्दर्भिक छ ?
सूर्यवाणी २०७७ असोज ४, आईतबार0428
सूर्यवाणी २०७७ असोज ४, आईतबार0408
सूर्यवाणी २०७७ असोज ११, आईतबार0379
सौगात घिमिरे २०७७ मङ्सिर २6, शुक्रबार0281
उपेक्षामा नैतिक शिक्षा - डा.महानन्द तिम्सिना
सूर्यवाणी २०७७ साउन ३२, आईतबार0278
सौगात घिमिरे २०७७ माघ १०, शनिवार068
सन्तुष्टीको फल - ज्ञानवर्द्धक लघुकथा
सौगात घिमिरे २०७७ भदौ ३, बुधबार 1 229
कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजाको महत्व
सौगात घिमिरे २०७७ कार्तिक २९, शनिवार0134
रमा एकादशी व्रत विधि र महत्व
सौगात घिमिरे २०७७ कार्तिक २6, बुधबार0124
पापकुंश एकादशी व्रत कथा
सौगात घिमिरे २०७७ कार्तिक ११, मङ्गलबार0261
इतिहासमै पहिलोपटक दसैंका बेला शक्तिपीठहरूमा ताला
सफाला एकादशी व्रत कथा
पद्मिनी एकादशी कथा तथा व्रत बिधि
हाम्रो बारेमा जान्कारी
परमा एकादशी व्रत विधि तथा कथा
कवि भोग्यप्रसाद भण्डारी– एक चिनारी
चाखलाग्दा पोष्टहरु र अपडेटहरू लिन यहाँ सदस्यता लिनुहोस्!
© २०२० Suryawani.com - सर्वाधिकार सुरक्षित।
हामी तपाइँको वेबसाइट मा सबै भन्दा राम्रो ब्राउजिंग अनुभव छ भनेर सुनिश्चित गर्न कुकीहरू प्रयोग गर्छौं। हाम्रो साइट प्रयोग गरेर, तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईं हाम्रो कुकी नीति र गोपनीयता नीति पढ्नुभयो र बुझ्नुभयो।